बहुमत आफूसँगै रहेको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीकाे दाबी, विपक्षीले सालसाजी गरेकै हुन् त ? - हाम्रो देश
बहुमत आफूसँगै रहेको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीकाे दाबी, विपक्षीले सालसाजी गरेकै हुन् त ?
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा पुनः नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा सदस्यहरूको बहुमत आफूसँगै रहेको दाबी गरेका छन् । एकल बहुमतकाे सरकार दाबी गर्दै पुनः मुख्यमन्त्री बनेका पाेखरेलले फेसबुकमार्फत् आफ्नो कुरा बाहिर ल्याएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशकाे यथार्थ भन्दै लामाे स्टाटस लेखेका उनले प्रदेश सभाको बहुमत आफूले प्राप्त गरेकाे दाबी गरेका हुन् ।
अविश्वास प्रस्ताव सभामा पेश हुने दिन आइतबार बिहानै अचानक मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पाेखरेलले पुनः एमाले दलबाट एकल बहुमतकाे सरकार बनाउने भन्दै उनले साेही दिन साँझ मुख्यमन्त्रीकाे शपथ लिएका थिए । बहुमत रहेकाे दाबीसहित प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विवरण बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाइ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गराएका हुन् ।
तर यसअघि नेकपा पार्टी हुँदाका बखत सांसद् चुनिएकी विमला कुमारी खत्रीले एमालेमा नरहेकाे र माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकाे सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेकाे चर्चा भएकाे थियाे । एमालेका अन्य केही सांसदले पनि पार्टी त्यागेर माओवादी-कांग्रेस गठबन्धनलाई सघाउने बताएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री पाेखरेलले एकै दिन राजीनामा र पुनर्नियुक्ति लिइसकेका छन् ।
हेराैँ उनले फेसबुकमा राखेकाे स्टाटस जस्ताकाे तस्तै-
वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहीरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर वहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन । जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो ।